Howlgalo Amaanka lagu xaqiijinaayo oo Saaka ka socda Magaalada Gaalkacyo – Radio Muqdisho
Howlgalo Amaanka lagu xaqiijinaayo oo Saaka ka socda Magaalada Gaalkacyo
Howlgaladaan saaka ka scocda Waqooyigi Magaalada Gaalkacyo ee Xaruunta Gobalka Mudug ayaa ayaa yimid ka dib markii xalay Kooxo hubaysani dileen Taliyihii hore ee Ciidamada Booliska Bermidka Maamulka Puntland C/rashiid Xasan Xaashi (Gebi gebi) xili uu xalay salaada Cishaha kusoo tukaday Misaajidka dabaqeynka ee Waqooyiga Gaalkacyo.
Ciidamada Amaanka Maamulka Puntland ayaa xalay waxay bilaabeen dadaalo lagu baadi goobaayo kooxihii Taliyaha dilay si gacanta loogu soo dhigo Cadaaladdana loo hor keeno iyadoo Caadmadu gacanta kusoo dhigeen tiro dad ah oo lagu tuhmaayo in ay qeyb ka ahaayeen falka.
Wali kama hadlin Saraakiisha Ciidamada Booliska Maamulka Puntland dilka xalay loo gaeystay C/rashiid Xasan Xaashi Gebgebi oo soo ahaan jiray Taliyihii hore Bermidka Puntland ee Gobolka Mudug hadana ka mid ahaa Saraakiisha Ciidamada Maamulka.
Saraakiisha Ciidamada iyo Maamulka Degmada Gaalkacyo ee Maamulka Puntland ayaa la filayaa in ay ka hadlaan Howlgalka lagu xaqiijinaayo amaan ee xalay ilaa saaka ka socda Waqooyiga Xaruunta Gobalka Mudug ee Gaalkacyo.
Dayax madoobaadkii ugu dheeraa Qarniga 21-aad oo xalay la arkay
QM oo dhibaato dhaqaale laga soo sheegay